Ụfọdụ ọrụ ntanetị weebụ bụ ndị a ma ama n'etiti ndị ọrụ n'ihi mmịpụta ihe omimi ha dị egwu nhọrọ, atụmatụ, na ihe onwunwe, ebe ọrụ ndị ọzọ dị mma maka ihe ọ bụla. Ọrụ ntanetị weebụ anyị kwurula ebe a adịghị mgbagwoju anya, ha nwere ike nyochaa ọtụtụ saịtị na blọọgụ. Ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ ihe omume nchịkọta, mana ndị na-esonụ bụ freeware na ga-emezu ihe azụmahịa gị chọrọ - kabelanschluss anmelden umzugsservice.
CloudScrape bụ ihe ntanetị weebụ na ntanetị na ntanetị ntanetị nke na-enyere aka ịchọta ọtụtụ data n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ na-enye anyị ụlọ ọrụ nke ịchekwa data na ebe dị iche iche nchekwa igwe ojii dịka Box.net na Google mbanye..I nwekwara ike idebe data gị n'ụdị CSV na JSON. Ọ bụ otu n'ime ọrụ nchịkwa nke igwe ojii kachasị ike na nke zuru oke na ịntanetị nke na-enyere aka ịnyagharị na saịtị, jupụta n'ụdị, na-arụpụta ígwè ọrụ na-ewepụta data oge.
Ihe Ntanetị Web View bụ ngwọta nkwụsị nke nnwale nchịkọta weebụ , ọdịnaya nbudata, na owuwe ihe ubi. Ọ bụ otu n'ime ndị nchịkọta data weebụ kachasị ike na ịntanetị. Ngwaọrụ na-anakọta data na ederede na ụdị oyiyi. Ọ na-edoziri data dabere na ihe ị chọrọ na ntinye ndị bara uru na ndị bara uru.